မောင်တောမြို့တောင်ပိုင်း၌ ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်နေရာ မချထားရေးအတွက် မောင်တောမြို့နယ် အပါအ? - Yangon Media Group
စစ်တွေ၊ နိုဝင်ဘာ ၄
ရခိုင်ပြည် နယ် မောင်တောမြို့နယ်တောင်ပိုင်း၌ ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည် နေရာမချထားရေးအတွက် မောင် တောမြို့နယ်အပါအဝင် မြို့နယ်သုံးမြို့နယ်မှ ဒေသခံပြည်သူ ၁ဝဝဝ ကျော်က တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်တင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်တောင်းဆိုခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ်တို့မှ ဒေသခံ ပြည်သူ ၁ဝဝဝ ကျော်သည် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် မောင်တောမြို့ပေါ်၌ လမ်းလျှောက် တောင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ”သူတို့ကို နေရာချပေးမယ် ဆိုရင် တစ်နည်းမဟုတ် တစ်နည်း တော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်လာ မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ သူတို့တွေ ကြောင့်ပဲ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ် နေတာ”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရာတွင် ပါဝင်သူ မောင်တောဒေသခံ ဦးဝင်း လှိုင်က ပြောကြားသည်။ ”ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မောင်တော ဒေသ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆူပူအ ကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားကြ သည့် ဘင်္ဂါလီများအား မောင်တော မြို့နယ်တောင်ပိုင်း၌ ပြန်လည်နေ ရာချထားပေးရန် အစိုးရက စီစဉ် နေကြောင်း သိရသည်။
”ပြန်မထားဖို့အတွက်လည်း အခုဆန္ဒထုတ်ဖော်ထားတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဒီဒေသမှာ သူတို့တွေကို မထားဖို့ကိုပဲ ကျွန်တော်တို့လို ချင်ပါတယ်”ဟု ရသေ့တောင်မြို့နယ် သံချောင်းကျေးရွာမှ ဦးအောင် သာကျော်က ပြောကြားသည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းအောင်သိန်း၏ မောင်တော မြို့နယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂါလီများအား ပြန်လည်နေရာမချထား ရေး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့ တိုက်တွန်းသည့်အဆိုကို ယခုနှစ် ဧပြီလတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်က အတည်ပြုထားပြီဖြစ်သော်လည်း အစိုးရက ယခုကဲ့သို့ စီစဉ်နေမှုကို ဒေသခံများက ကန့်ကွက်နေကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှု မတွေ့ရှိခဲ့ ဟုဆို
မိုးထိမိုးမိဒေသရှိ ရွှေလုပ်ကွက်ကြီး(A)တွင် ရွှေ ခိုးတူးသူများနှင့် ပစ္စည်းခိုးယူသူ ၁၅၁ ဦးကို ??